Lisy Mianjoria – Blaogin'i Voniary
Môssieur Njo – Ranjasoa Publishing 2016
Andro inona isika androany ?
Andro inona androany ? Farandro letsy androany a! Izany ve dia tsy fantatr’ialahy? P112
Nitsingevaeva teo anelanelan’ny nofy sy ny tena izy Rabe tatoato izay. Nisafotofoto be ihany ny tao an-dohany ka andro roa sisa no tadidiny: ilay alatsinainy, izy nihisatra teo am-pandriana ary ilay Alahady, izy sy ny reniny saika voadonan’ny takisia be. Tsy niala tao an-tsainy koa ilay tovovavy iray, Lisy, nambabo ny fony, nifanojo fijery taminy tao am-piangonana avy eo nanjavona. Izy nivoaka saika hitady azy iny indrindra no tojo tranga mampivarahontsana. Vaina’afo sy avandra no nipatrapatraka teny rehetra teny, faharavana no nanodidina azy. Taitra, teo am-pandriany,nefa izy nony kelikely.
Nitohy ihany ny toe-javatra hafahafa niainany. Rahona mavokely no hitany nitsingevana tao an’efitranony ary Ilay Zavatra fotsy maso no tazany nitsangana avy teo an-joron-tranony. Tsitapitapitr’izay, tonga i Lisy nanavotra azy avy tao anaty trano efa main’ny afo, tahaka an’Antananarivo rahateo, afo be nidedaka sisa. Tsy nitsahatra nanenjika azy roa eran’ny tanana Ilay Zavatra fa nanana paikady ilefasana hatrany i Lisy. Ity farany moa dia tsy nanam-potoana loatra anazavana ny pitsopitsony rehetra tamin-Rabe izay valalanina izay tsizy. Ny hany nazava dia izao: rava ity tontolo ity ary misy tontolo iray hafa any ka eo amin’ny farihin’Anosy no lalana mankany.
Antananarivo hafa kely no hitan-dRabe tao ambadika tao: farihin’Anosy madio mangatsakatsaka ary tànana manaraka fanajarina àry fomba. Hatrany Mahajanga aza tongan’ny lamasinina ary tsy latsa-danja koa ny hamevan’ny tanàna. Izay jerena rehetra dia raitra avokoa: teleferika, saha an-tànana, sekoly lehibe sy foto-drafitr’asa maro manara-penitra. Ny fiarahamonina koa lafatra, ny fahadiovana voakajy ary ny soatoavina Malagasy voatandro tsara. Nahay nisafidy ny làlana tsara tamin’ny fotoan-tsarotra ry zareo tany ka toa paradisan-tany no niainana. Tandindonin-doza koa anefa ity tontolo mira zotra ity noho ny faharavan’ilay tontolo iray ka Rabe ihany no afaka hanavotra azy.
Nisy nifofo hatrany ny ain-dRabe hatrany ka hatraty. Tamin’ny fotoana tsy nampoizin’izy roa iny indrindra no nisy diraonina nifaoka ny tovolahy. Nigadona àry ny farandro, tonga ny Ohabolandoza. Tsy inona moa izany fa ireo toetra ratsy mikiky ny olombelona sy manakorontana fiarahamonina no tonga nofo. Nanely virosy haingam-pifindra ireto Ohabolandoza. Vokany: lo sy rava izay rehetra natsangana, nanary fako eny rehetra eny ny olona, nifampiatsaravelatsihy ny mpiray monina, nanimba ny fananana iombonana tsy am-piheverana ny sasany. Tsy ela dia lasa ory hava-manana avokoa izay olona sendra an’I Lisy sy Rabe ka nanenjika, nikasa hamono hahafaty azy. Tapi-dàlan-kaleha ireto tanora ny farany ary teo no nanambana hamono ny iray amin’izy roa ny Ohabolandoza.
Niroso handray ny bala mba iarovana an’I Lisy, tamin’ny fomba tsy nampoizin’iza na iza, Rabe ka voatifitra. Nahafoy ny ainy ho an’ilay tiany izy. Tsy fantany nefa fa iny fanaovany sorona ny tenany iny no nanavotra ny tontolo. Resy ny farandro. Rehefa sitrana tamin’ny ratrany anefa Rabe dia tsy maintsy nitodi-doha tany aminy, taty amin’ny Madagasikarany. Mafy ny fisarahana nefa nosarangotiny ilay tsirim-panantenana hifankahita amin’I Lisy indray raha madio ny farihin’Anosy.
“Ny manarina ny fiarahamoninareo mila ezaka tsy an-kijanona, finiavana, fikaonan-doha, fandavan-tena ary, indrindra indrindra, efa hainao ihany, fitiavana, fifankatiavana, fifampitsinjovana” P 323
Antananarivo vaovao, asa soratra môssieur njo, famintinana lisy mianjoria, farandro, madagasikaran'i Lisy, nofinofy Madagasikara
4 commentaires sur “Lisy Mianjoria”
Ping: Zaza ratsy taiza !... Fa iza no nitaiza ? - Book News Madagascar
Ping: Antananarivo sy ny rano, tantara mitohy
tsirery dit :
Ahoana no ahazoana ity boky ity pdf?
Ity indray tsy misy amin’ny endriny PDF fa ao taratasy. Ao amin’ny pejy Facebook « Mose Njo » no ahafahanao mamandrika azy.